Ukuthatha isitimela ingenye amafomu Underrated iningi nangezinto zokuhamba zanamuhla. Njengoba InterContinental indiza ugibele babe ethengekayo njalo ngonyaka, kodwa izitimela kukhona kuyanda yonke indawo. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani ehamba ngesitimela ingenye yezindlela esithakazelisa kakhulu ukuze…
New high-speed, cross umngcele izitimela azoqhubeka evuleka imigqa emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, they cishe njalo ukushaya air travel ngokuqondene nenduduzo, nenzuzo, nesivinini travel. Okwamanje, kukhona abaningi amanethiwekhi isitimela emhlabeni wonke! Wonke umuntu ubani ku engu- umngcele izitimela…
Omunye ezivamile nezindlela elula ukuhamba phakathi naseParis kuyinto nge Eurostar, isitimela ngesivinini yokuxhuma izihloko ezimbili. Nakuba zikhona plethora ongakhetha zabahamba ngifuna ukwenza hop, the Eurostar remains one of the…
Uma uhlala e-Europe kanye sowunegama ngempelasonto onga (noma isonto lonke!), ukusho “yebo” ukuze Ukuvakashela i-Vatican City nge wesitimela futhi ukuyithanda ngejubane! This article was written to educate about Train Travel and was made by Save…
I-Europe igcwele ubuciko, umlando, namasiko. Akukho ukumangala ke ukuthi kubuye ekhaya kwelanga engcono. Nge Londoloza Isitimela, ride isitimela imayelana uhambo, ngaso sonke isikhathi lapho uya khona. Ngakho, sit back and relax and be…